Mi Band 5 an'ny Xiaomi dia hanana efijery lehibe kokoa sy fanohanana NFC ho an'ny rehetra | Androidsis
Hatramin'ny nandefasan'ny Xiaomi ny taranaka voalohany an'ny Xiaomi Mi Band, miaraka amin'izany tany amin'ny firenena maro dia nanjary fantatra ilay orinasa, ny fehin-tànana Mi Band dia nanjary resabe teo amin'ny tsena namela azy ho lasa mpanamboatra lehibe indrindra eran-tany amin'ny resaka qualités.
Ny antony lehibe nahatonga azy nankasitrahan'ny besinimaro dia tsy ny vidiny ambany ihany, fa koa ny mety hanarahana ny hetsika ara-batana ataontsika. Amin'izao fotoana izao, afaka mahazo ny Mi Band 4 eo amin'ny 30 euro eo ho eo izahay amin'ny Amazon, saingy ho avy tsy ho ela ny taranaka fahadimy.
Araka ny nolazain'i Tizenhelp, raha tsy mitanisa hoe avy aiza ny loharano, ny Xiaomi Mi Band 5 dia afaka mampiditra efijery lehibe kokoa, manokana avy amin'ny Loko AMOLED 1,2-inch. Ny Mi Band 4 izay misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia manana efijery 0,9-inch. Saingy tsy io irery no zava-baovao avy amin'ny tanan'ny taranaka fahadimy amin'ity fehin-tànana miisa ity.
Araka ny fampitam-baovao ihany, ny taranaka fahadimy an'ny ny Mi Band 5 dia hampiditra chip NFC manerantany, izany hoe, azo ampiasaina manerantany mba handoavana vola amin'ny alàlan'ny fehin-tànana nefa tsy mila mampiasa finday avo lenta. Na dia marina aza fa misy ny Mi Band 4 misy puce NFC ihany koa dia any China ihany no tohanana.
Ny vidin'ny Mi Band 5 dia tokony ho 179 yuan, sahabo ho 26 dolara hanovana, mihoatra na latsaka ny vidiny mitovy nanombohana ny kinova teo aloha tany Sina. Amin'ity vidiny ity dia mila ampiana haba isan-karazany mifandraika amin'ny firenena tsirairay, ka amin'ny farany, ny vidiny any Eropa dia manodidina ny 30 na 35 euro, eo amin'ny 35 na 40 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Mi Band 5 an'ny Xiaomi dia hanana efijery lehibe kokoa sy fanohanana NFC ho an'ny rehetra